Muxuu ka yiri Roberto Martínez wararka lala xiriirinayo inuu noqon doono badalka lopetegui ee kooxda Real Madrid? – Gool FM
Muxuu ka yiri Roberto Martínez wararka lala xiriirinayo inuu noqon doono badalka lopetegui ee kooxda Real Madrid?
(Real Madrid) 01 Nof 2018. Macalinka xulka qaranka Belgium ee Roberto Martínez ayaa iska diiday inuu ka hadlo wararka xanta ah lala xiriirinayo inuu noqon doono badalka Julen lopetegui ee kooxda Real Madrid.
Roberto Martínez ayaa ka mid ah macalimiinta sida xoogan ugu sharaxan inay la wareegi karaan shaqada tababarka ee kooxda Real Madrid, waxaana sidoo kale ku wehliya dhigiisa reer Talyaani ee Antonio Conte.
Wariye ayaa wuxuu weydiiyay Roberto Martínez inuu ku sii jeedo shaqada tababarka ee kooxda Real Madrid, wuxuuna ku jawaabay.
“Yaanu waqtiga ku luminin xaaladahan oo kale” Martínez ayaa u muuqda in uu si cad isaga diiday ka hadlida arintan.
Wargeyska Isbaanishka ah ee “AS” ayaa wuxuu dhankiisa ku tilmaamay arintan in madaxweynaha kooxda Florentino Perez uusan wax dalab ee rasmi ah u gudbinin Roberto Martínez, islamarkaana uu wali ka walwalsan yahay xulashada macalin cusub uu ku aamino shaqada tababarka ee kooxda Real Madrid.
Real Madrid iyo Juventus oo is dhaafsanaya labadaan xiddig
Aaron Ramsey oo lagu war galiyay inuu raadsado koox uu ku biiri karo